MUUQAAL: Wasiir Dubbe oo ka hadlay Fashilka Shirkii Muqdisho, Kuna eedeeyay PL iyo Jubaland | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Wasiir Dubbe oo ka hadlay Fashilka Shirkii Muqdisho, Kuna eedeeyay PL iyo Jubaland
Muqdisho ( Kalshaale ) Sida aad lawada socotaan bishii 7-aad ee Sannadkii hore ee 2020-kii waxa soo bilaabmay doodda ku saabsan Nooca Doorashada Soomaaliya ee 2020/2021-ka. Dowladda Federalka Soomaaliya oo rabtay in ay dalka u hoggaamiso barnaamijka xisbiyada badan ayaa waxa qaar ka mid ah Maamul Goboleedyadu ku dhageen in ay joojiso hannaankii metelaadda shacabka ee hal qof iyo hal cod, iyo curashadii koowaad ee hannaanka xisbiyada badan oo rajadiisu muuqatay. Waxaana Dowladda lagu riixay in ay ka leexato jidkii qummanaa una janjeersato hannaanka doorashada dadban iyo metelaadda kooban.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42071
2 Comments for “MUUQAAL: Wasiir Dubbe oo ka hadlay Fashilka Shirkii Muqdisho, Kuna eedeeyay PL iyo Jubaland”
Dubbebayaa war soo tuuray hore loo diyaariyey..kkkkk
Waxa Farmaajonka helayo buuqa aniga ayaaba fahmin.
Beeso-lamaanka iyo Hawiye beeso jecel kaalintoodii ma qaadan in dalka la badbaadiyo.
Hadda waxaa la rabaa in Puntland iyo Jubbaland laga scape gaot.
Xaajo waa cakiran tahay.
April 8, 2021 - 10:08 am
Dubbe ayaa war habowsan soo tuuray hore oo loo diyaariyey..kkkkk
Waxa Farmaajo ka helayo buuqa aniga ayaaba fahmin.
Beeso-parlamaanka iyo Hawiye beeso jecel kaalintoodii ma qaadan in dalka la badbaadiyo.
Hadda waxaa la rabaa in Puntland iyo Jubbaland laga dhigo scape-gaot.